Ny rindranasa tsara indrindra hampidina mozika maimaim-poana amin'ny 2021 | Androidsis
Ignacio Sala | | Fampiharana Android, Mozika maimaim-poana, Android cheat, Tutorials
Raha tianao ny misintona mozika maimaim-poana sy amin'ny kalitaon'ny feo avo ary miaraka amin'ny rakotra rakikira, dia nosoratana manokana ho anao ity lahatsoratra ity, ary ao no ahitanao ireo izay ho ahy anio ny fampiharana tsara indrindra hampidinana mozika maimaim-poana anio.
Ankoatry ny fanolorana azy ireo sy famelana rohy mivantana hampidinana ireo fampiharana roa mampihetsi-po izay hanampy anao hisintona mozika maimaimpoana mivantana avy amin'ny terminal Android anaoAmin'ny faran'ny lahatsoratra sy ny horonantsary dia manazava ihany koa aho ary manome sosokevitra ny bots tsara indrindra hampidina mozika mivantana avy amin'ny Telegram nefa tsy mila misintona fampiharana fanampiny.
tolotra: Azonao atao ny manandrana maimaim-poana ny Amazon Music Unlimited avy amin'ity rohy ity.
1 Fildo, fampiharana tsara indrindra hampidinana mozika amina kalitao avo lenta
8 Fampihainoana mihaino mozika amin'ny streaming maimaim-poana
8.3 Music Music
9 Sintomy ny mozika maimaim-poana avy amin'ny Telegram amin'ny alàlan'ny bots tsara indrindra
Fildo, fampiharana tsara indrindra hampidinana mozika amina kalitao avo lenta
Raha hatramin'ny fotoana fohy lasa izay, inona ho ahy no fampiharana tsara indrindra hampidina mozika mivantana amin'ny Android-tsika ny fampiharana ofisialy amin'ny kinova sinoa Huawei Music, dia nifindra tamin'ny toerana faharoa, nandresy ny lalao tamin'ny fomba rehetra nampiharina tamin'ny fomba ofisialy Fildo.
Fildo dia rindranasa izay tsy mampiantrano karazana atiny ho fisintomana mivantana avy amin'ireo mpizara azy, fa kosa ampiasao ny serivisy mpizara mozika mivantana toy ny Netease, Mozika VK na tranomboky mozika an'ny YouTube.
Avy amin'i Fildo isika dia ho afaka hahita izay rehetra tadiavintsika, na manao ahoana na manao ahoana zava-baovao, ity ary ahoana no mety hitranga raha tsy izany, ireo fiatraikany lehibe amin'ny fotoana rehetra tsy lany daty ireo.
Ao amin'ilay horonan-tsary mifatotra no hazavaiko ny fomba fampidinana ny rindranasa, ny fampiasana azy ary izay rehetra atolotray anay ary koa asehoko anao ny fahombiazany amin'ny fampidinana izay mozika rehetra tadiavinay mba hahafahantsika mihaino azy tsy misy fifandraisana tamba-jotra.
Ankoatra an'io sy sanda fanampiny, dia izay Avy amin'ny fampiharana Fildo ofisialy ho an'ny Android dia hahafahantsika mihaino ny mozika mahaliana antsika amin'ny streaming mivantana koa.
Sintomy ny Fildo ho an'ny Android amin'ity rohy ity.
Huawei Music Player dia mitohy ho ahy ho iray amin'ireo fampiharana tsara indrindra hampidina mozika maimaim-poana amin'ny Android, fampiharana Huawei ofisialy ho an'ireo fantsony izay amidy any Shina sy ireo Ny hany dikan-teny manohy miasa ivelan'ny faritany aziatika dia ilay namboarina tamin'ny volana aogositra 2016 y izay azonao sintonina avy amin'ity rohy ity ihany.
Raha te hahita ny fomba fiasan'izy ireo ianao, ny fomba fampidinana sy ny fametrahana azy, dia mila mijery ilay horonantsary sisa tavela fotsiny aho eo am-piandohan'ity lahatsoratra ity. Fampiharana iray izay Na dia avy amin'ny mpanakanto sinoa aza ireo tolo-kevitra hita eo amin'ny efijery an-trano ary izany no antony mahatonga azy ireo amin'ny teny sinoa, ny mpampiasa azy dia amin'ny teny anglisy ary tena tsotra sy tsotra ampiasaina izy io.
Raha te hiditra lalindalina kokoa amin'ny rindranasa Huawei Music Player ianao sy izay rehetra atolotray anay dia azonao atao izany jereo ity horonantsary manaraka ity nataoko taloha izay izay anazavako ny zava-mahaliana rehetra atolotray ho anay fampiharana Android manaitra.
Sintomy eto ny Huawei Music Player.
Ny lahasa lehibe hitantsika ao amin'ny Snaptube dia ny misintona horonantsary YouTube, horonan-tsary azontsika alaina amin'ny fanapahan-kevitra samihafa ary azontsika aorina esory ao amin'izy ireo ilay audio mihaino azy ireo sy amin'izay toerana tiantsika nefa tsy mila mampiasa ny taham-bolantsika. Ny hany fetra dia ny fitahirizana ny fitaovantsika.
Mba hisorohana ny fitaovantsika tsy hameno haingana ireo horonantsary izay mety tsy kasaintsika hojerena intsony dia azontsika atao misintona mivantana ny audio amin'ny endrika MP3Mba hanaovana izany, rehefa manindry ny bokotra handefasana ianao dia tsy maintsy manindry ilay safidy Safidio vahaolana ary safidio MP3.
Snaptube dia tsy mamela antsika hisintona horonantsary YouTube hitrandraka ny feo amin'ny endrika mp3 ihany, fa azontsika ampiasaina koa misintona izay horonan-tsary avy amin'ny sehatra hafa toy ny Facebook, Instagram, Veo, Dailymotion, Vimeo, Metacafe, Soundcloud ...
Ity fampiharana ity tsy misy, noho ny antony mazava, ao amin'ny Play Store, noho izany dia tsy maintsy aloha hampavitrika ny fametrahana ny rindranasa amin'ireo loharano tsy fantatra isika. Tahaka ny ankamaroan'ny rindranasa izay tsy misy ao amin'ny Play Store, Snaptube dia mampiseho andiana sora-baventy hahafahan'ny mpandrindra mitazona ny fampiharana amin'ny alàlan'ny dokam-barotra.
Sintomy ny Snaptube ho an'ny Android
YTD 2 dia fampiharana manaraka filozofia mitovy amin'ny Snaptube, satria tsy mamela antsika hisintona ny horonantsarin'ireo mpanakanto tiantsika indrindra fotsiny izy io, fa mamela antsika misintona ny mozika ankafizinay amin'ny endrika mp3 sy m4a haingana sy mora.
Ny loharano ahazoanao ny horonan-tsary sy ny mozika dia YouTube, toa ny Snaptube. Tsy toa an'i Snaptube, YDT 2 dia manolotra safidy roa rehefa liana amin'ny hira iray isika: misintona horonantsary na feo, izay mahatonga ny fizotran'ny hira ho haingana kokoa, ho mora kokoa ary tsy ho sarotiny.
Raha te-misintona ny mozika izay maneno indrindra eto amin'ny firenentsika isika, dia afaka miditra lisitra iray izay hira izay milalao betsaka ao amin'ny firenena manokana.
YTD 2 dia tsy misy ao amin'ny Play Store, izay hanery antsika hampihetsika ny fametrahana ny rindranasa amin'ireo loharano tsy fantatra. Azontsika atao ny misintona ny fampiharana mivantana avy amin'ny tranokalan'ny mpamorona azy. Ny rindranasa dia mampiditra sora-baventy kely eo am-pototry ny fampiharana ho fanampin'ny doka, sora-baventy ary dokam-barotra amin'ny efijery feno izay tsy misy fiatraikany amin'ny fiasan'ny fampiharana fa mamela ny mpamorona manolotra fanavaozana.
Ny fampiharana NetEase Cloud Music, izay antsoin'ny maro ho Spotify sinoa, dia iray amin'ireo rindranasa tsara indrindra anananay mba hankafizanay ny mozika ankafizinay na aiza na aiza misy anay ary nisintona anay tamin'ny alàlan'ny fifandraisana Wi-Fi (aleony hitahiry angona finday).
Ity rindranasa ity, izay tsy misy ao amin'ny Play Store noho ny antony mitovy amin'ny Snaptube, dia nitombo nandritra ny taona maro ary manome antsika katalaogy mihoatra lavitra noho izay ary afaka mahita hira tonga ao an-tsaina isika. Ho fanampin'izay, tsy mamela antsika hisintona ireo hira fotsiny izy io, fa mamela antsika hilalao azy amin'ny alàlan'ny streaming ihany koa.
Para ampidino ity app ity (teo aloha dia tsy maintsy nampandeha ny fametrahana ny rindranasa avy amina loharano tsy fantatra izahay) tokony hitsidika ny rohy manaraka ary tsindrio ny kinova farany hanombohana ny fisintomana fampiharana.
TinyTunes nametraka tanteraka famolavolana hanome antsika ny mety misintona izay hira tadiavinay na mila mivantana amin'ny fitaovantsika izahay. Izy io dia manana angon-drakitra lehibe iray izay ananantsika eo am-pelatànana ny katalaogna mitovy amin'izay hitantsika amin'ny sehatra mozika mivantana (mitahiry ny halavirana).
Manolotra antsika koa io fidirana io Hira sy rakikira no nilalao indrindra tao amin'ny iTunes miaraka amin'ireo famoahana vaovao, ireo hira 100 amin'izao fotoana izao araka ny filazan'ny magazine Billboard, feon-telefaona ... Izy io dia misy takelaka ahafahantsika miditra amin'ireo hira nofidinintsika, hira izay azontsika lalaovina mivantana avy amin'ilay fampiharana mihitsy.
TinyTunes koa tsy misy ao amin'ny Play Store (ampidino ny fametrahana loharanom-baovao tsy fantatra alohan'ny hametrahana azy), noho izany dia mila mampiasa pejy web an'ny antoko fahatelo isika Manao ahoana izy ao. Ity rindranasa ity dia mampiditra sora-baventy dokam-barotra eo ambanin'ny efijery, sora-baventy izay tsy misy fiatraikany amin'ny fiasan'ny fampiharana amin'ny fotoana rehetra ary indraindray mampiseho doka amin'ny efijery feno.
Jamendo Music dia fampiharana maimaimpoana tanteraka izay manome antsika fidirana hira 500.000 mahery, hira azontsika alaina amin'ny fikitihana tokana. Tsy toy ny sehatra hafa, ao amin'ny Jamendo Music no tena ahitantsika mpitendry mozika mahaleo tena, noho izany safidy tsara indrindra hahitana hira sy vondrona vaovao.
Ankoatry ny famelana antsika hankafy mozika tsy miankina dia manana ihany koa isika Onjam-peo 13 miaraka amin'ireo karazana toy ny: Lounge, Electro, Hip Hop, mpamoron-kira, World Music, Jazz, Classical, Pop and Rock. Ny rindrambaiko dia miasa any aoriana, mba hahafahantsika mankafy ny mozika ankafizintsika miaraka amin'ny efijery, toy ny hoe fampiharana mozika.
Developer: Ekipa Jamendo
Fampihainoana mihaino mozika amin'ny streaming maimaim-poana
Indraindray, mpampiasa maro no manandrana mitady ny tongotra telo mankany amin'ilay saka amin'ny alàlan'ny fitadiavana rindranasa hankafizany ny mozika ankafizin'izy ireo nefa tsy raisina ireo sehatra malaza indrindra. Spotify dia manolotra antsika fidirana amin'ny sehatry ny mozika iray manontolo maimaim-poana miaraka amin'ny doka, doka izay miankina amin'ny fotoan'ny andro, dia mety ho betsaka kokoa na latsaka.
Mazava ho azy, raha mitady hira manokana hilalaovana amin'ny kaonty maimaim-poana ianao dia tsy Spotify no tadiavinao, satria io safidy io tsy misy raha tsy amin'ny alàlan'ny kinova isam-bolana. Ho an'ny zavatra hafa rehetra, Spotify dia safidy tsara hijerena hankafy ny mozika amin'ny streaming.
Spotify: mozika sy podcast
Ny sasany amin'ireo rindranasa nolazaiko tamin'ny fizarana teo aloha izay ahafahantsika misintona ny mozika ankafizinay amin'ny mp3, mamela antsika hankafy azy amin'ny alàlan'ny streaming ihany koa, tsy mila misintona ireo rakitra audio mivantana eo amin'ny fitaovantsika, miaraka amin'ireo tahiry fitahirizana vokatr'izany.
Ity Spotify sinoa ity, araka ny niantsoana azy hatramin'ny nahatongavany teny an-tsena 5 taona lasa izay, dia manome antsika ny katalaogna mitovy amin'izay azontsika atao hita amin'ny ankamaroan'ny sehatra mozika mikoriana.
Raha te-hisintona ny NetEase Cloud Music dia azonao atao mivantana izany amin'ny alàlan'ity rohy ity, hatramin'ny fampiharana Tsy misy ao amin'ny Play Store io.
Safidy iray hafa anananay, raha mpampiasa Perdana izahay, dia ny Amazo Prime Music, serivisy mozika mivantana an'ny Amazon ho an'ireo mpampiasa Prime. Ity serivisy ity dia manome ny mpanjifa rehetra hira 2 tapitrisa mahery sy ny playlist an-jatony sy ny gara tsy misy doka. Ho fanampin'izany, ahafahantsika misintona ireo hirantsika ankafizintsika mba hahafahantsika mihaino azy ireo na aiza na aiza misy antsika fa tsy mila fifandraisana Internet.
Amazon Music: Mihainoa podcast sy mozika vaovao
Ny sehatry ny mozika Jamendo Music, araka ny efa noresahiko tao amin'ny fizarana teo aloha, dia mifantoka amin'ny fanomezana mozika avy amin'ny marika tsy miankina, Famaritana tsy manana ny herin'ny marika lehibe ary mitady fomba hampahafantarana ny tenany amin'ireo karazana fampiharana ireo.
Jamendo Music, tsy mamela antsika hisintona ireo hira tiantsika indrindra ihany, fa koa mamela antsika hankafy amin'ny alàlan'ny streaming ny katalaogy azo alaina amin'ny alàlan'ny fampiharana izay ahafahantsika misintona mivantana avy amin'ny Play Store amin'ny alàlan'ny fanindriana ny rohy manaraka.
Sintomy ny mozika maimaim-poana avy amin'ny Telegram amin'ny alàlan'ny bots tsara indrindra
Raha mpampiasa Telegram ianao, azo antoka fa fantatrao fa avy amin'ilay rindrambaiko mihitsy, na avy amin'ny Android, iOS, OSX, Linux, Windows na avy amin'ireo kinova an-tranonkala momba ny fampiharana fandefasan-kafatra mailaka tsara indrindra amin'ny fotoana rehetra, ho afaka mampiasa bots mba hikarohana ary misintona mozika amin'ny kalitao avo lenta afaka tanteraka ary avy amin'ny fampiharana Telegram-
Manatevin-daharana ny Fiarahamonina Androidsis, fipihana io rohy io ihany, azonao atao ny mahita takelaka bokotra izay, araka ny hitanao amin'ny sary miraikitra eo ambonin'ireto tsipika ireto dia manome rohy mivantana anao izahay hanombohana ny bots mozika tsara indrindra ho an'ny Telegram ary manomboka mankafy ny zavatra rehetra atolotry ny fampiharana anay ianao, fampiharana iray izay mihoatra lavitra noho izay natolotry ny fampiharana fandefasan-kafatra nentim-paharazana ho antsika, ary izany dia ny Telegram no ho avy.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fampiharana Android » Ny fampiharana tsara indrindra amin'ny fampidinana mozika maimaim-poana
Miadia amina orinasa tsy fantatra hanafika ny tany amin'ny ady an-tany
Wiko View4 Lite dia misy any Espana izao: tontonana 6,52 ", fakan-tsary triple aoriana ary Android 10